Isitolo esidayisa yonke impahla kwaholela ukukhanya okuhlobisa, izibani eziholelekile zokuhlobisa ikhaya | UHuayi Lighting
Ikhaya > Imikhiqizo > Light okuhlobisa
Izibani ze-LED zokuhlobisa
, ngenxa yemibala ecebile, ehlala isikhathi eside nokonga amandla, ifaneleka kakhulu ngezinhloso zokuhlobisa. Faka amalambu okuhlobisa e-LED kumabhodi wesifunda, izintambo eziguquguqukayo, noma ezinye izinto. Le mibono yokuhlobisa amalambu we-LED ingasetshenziswa njengezibani zokuhlobisa ze-LED zokulala, amalambu ezinhlamvu, amabhodi ezimpawu, amalambu wethrekhi, amashubhu, njll.
Ukukhanya kwe-LED okuhlobisa kungukukhanya kwangaphakathi futhi kufana nobucwebe basekhaya: kusiza isikhala sakho sicwebezele futhi sikhanye. Finyelela endlini yakho futhi ukhiphe izici zayo ezinhle ngokungeza izinto zokukhanyisa ze-LED zokuhlobisa. Izibani ze-LED zokuhlobisa igumbi azisetshenziswanga kuphela ukukhanyisa okugqamile, kepha futhi nobuhle.
I-Huayi Lighting ingumkhiqizi wezibani ze-LED zokuhlobisa, ezikhethekile ekukhiqizeni amalambu okuhlobisa asendlini. Sineqembu lobungcweti lamathalente, imibono eyingqayizivele yezibani ze-LED, futhi sinikeza amakhasimende izinhlobo ezahlukahlukene zezibani zokuhlobisa ze-LED.
Ikhwalithi ephezulu yekhandlela le-crystal A36D51458-66 wholesale-Huayi Lighting
Kuhle isibani phansi ngokwezifiso FT10112 ifektri intengo-Huayi Lighting